Wasiirka Amniga Galmudug oo booqasho ku tegay jiidda hore ee dagaalka. – news
Wasiirka Amniga Galmudug oo booqasho ku tegay jiidda hore ee dagaalka.
Galmudug ayaa dhawaan ku dhawaaqday guluf dagaal oo deegaanada maamulkaas looga saarayo Al-shabaab.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka amniga Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo saraakiil uu hoggaaminayay ayaa booqasho ku tegay jiidda hore ee dagaalka deegaanada Galmudug, isagoona halkaas dhiira gelin iyo talooyin ku siiyay ciidamada ku sugan aagga dagaalka.
Deegaanada uu Wasiirka booqday ayaa kala ah: Tara-Guduud, Beer Cabdi Faarax, Galo, Faragoo, Beer Liiban Galle, Hog dugaag iyo Higlaale, isagoona booqashadiisa ku soo afjaray magaalada Gadoon uu bulshada kula kulmay.
Saraakiisha booqashada kullamaanisay wasiirka ayaa waxaa ka mid ahaa taliyaha Qeybta 21aad ee ciidanka XDS S/Guuto Khooje, taliyaha ciidamada Booliska Galmudug S/guuto Bishaar, taliyaha ciidamada Danab ee ku sugan Galmudug G/le Mukhtaar iyo saraakiil ka kala tirsan qeybaha ciidamada qalabka sida.
Wasiirka ayaa taliyaasha ciidamada ku sugan deegannadaas kula dar darmaay in ay dar-dar geliyaan dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, isagoona u balan qaaday Galmudug iyo dowladda dhexe in ay la garab taaganyihiin wax kasto oo dhinaca taageerada iyo saadka ahba ku saabsan.
Deegaanada uu booqday Wasiirka ayaa waxaa dhawaanahaan ka socday abaabul dagaal, kaas oo looga soo horjeedo Ururka Al-Shabaab, islamarkaana looga nadiifinayo meelaha ay kaga suganyihiin Mudug iyo Galgaduud, waxaana ciidamada qeyb ka ah ciidamo iskood isku abaabulay oo dadka deegaanka ah.